E-Journal: August 2008
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကိုကျွန်တော် မထိန်းသိမ်းနိုင် ဖြစ်စရာလေးတွေ တွေ့ကြုံနေရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စီစစ်စရာလေးတွေ ရှိလာတယ်။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်း လုပ်နေရတယ်။ အဲဒီတော့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် စိတ်အစာပြေ ရှောင်ပုန်းချင်လာတယ်။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီစာလေးကိုတော့ ငါဖတ်အုံးမှဆိုပြီး စာတစ်ပုဒ် ဖတ်နေမိပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လေးကိုလည်း သတိတွေအရမ်းရနေတော့ အခုကျွန်တော် ဖတ်နေတဲ့ စာလေးမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သဘောကျမိလို့ မျဉ်းသားမိတာလေးတွေကို ပြန်ဝေမျှလိုက်တယ်။ စာတစ်ပုဒ်လုံးမပေးမိလို့ တောင်းပန်တယ်။ ဖတ်မိပြီးသားသူတွေက စိတ်ဆိုးမိကြမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီစာက တစ်ပုဒ်လုံးဖတ်မှ ပိုလို့တန်ဖိုးရှိတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတွေကိုပဲ ဖော်ပြလိုက်တယ်။ ဒီအထဲကနေ တွေးစရာ၊ စိတ်ကျေနပ်စရာ တစ်ခုလောက် ဖတ်မိသူတွေ ရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ။
သဘာဝတရားက လူတွေအပေါ် တန်းတူညီမျှ အတူတူထားတာတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါ အချိန်ပါပဲ။
ဖြုန်းပစ်တဲ့ အချိန်တွေက အသက်ရှင်ဖို့သက်သက်သာ။ အသုံးချတဲ့ အချိန်တွေကတော့ ဘဝ။
လောကကြီးမှာ နေရတဲ့အခိုက်အတန့် အချိန်ကို ဘယ်လိုကုန်စေမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာဟာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပြဿနာ။
ဘာရလာဒ်မှ မမျှော်မှန်းဘဲ အလိုက်သင့်အလျားသင့် အချိန်ကုန်သွားတဲ့ လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အကျိုးရှိအချိန်ဆိုတာ ကြုံသလိုကျသလို ကုန်တဲ့ ဝေလေလေ အချိန်တွေ မပါပါဘူး။
ကိုယ့်ဘဝ ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ။ ကိုယ်ဘာကို လိုချင်သလဲ။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာက ဘာလဲဆိုတာတွေကို မသိရင် အချိန်ကို အကျိုးကျိုးရှိရှိ သုံးရာရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
“Know Thyself - ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိပါ။”
လူဟာ သူ့ကိုယ်သူ မရှာဖွေပဲနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေရဲ့ လှုံ့ဆော်ချက်တွေအတိုင်း လှုပ်ရှားနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထဲမှာ နောက်ဆုံး လှုပ်ခတ်သွားလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့တာ ဘယ်တုန်းက၊ ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ။
ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ မပက်သက်ပေမဲ့ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ တော်သလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ငါ ဘာစိတ်ကူးလေ့ရှိသလဲဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း မိမိရဲ့ ငါကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မိမိရဲ့ စိတ်သဘာဝ ရင်ထဲက သဘာဝလေးတွေကို ဖော်ထုတ်ကြည့်သလိုပဲ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ တန်ဖိုးတွေ အသိစိတ်တွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြည့်ဖို့ အကြံပေးထားဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘဝဟာ ဘယ်လိုနေထိုင်မှ၊ ဘယ်လိုကျင့်ကြံမှ၊ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးတွေကို တွေ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့။
“ငါ” ကို သစ္စာရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုကတော့ “ပထမအလုပ်ကို ပထမလုပ်”ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။
“ပထမအလုပ်” ဆိုတာကလည်း မိမိ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း ပထမထားတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုယ်ငါမသိရင် ငါ့ရဲ့ ပထမအလုပ်ဆိုတာကို သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတော့မယ်ဆိုရင် အခြေခံအကျဆုံး ပထမအချက်ကတော့ “မိမိကိုယ်ကို မိမိ သစ္စာရှိရေး” ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ပြဌာန်းခြင်းဟာ “ခေါင်းဆောင်မှု”ရဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီအလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ “စီမံခန့်ခွဲမှု”ရဲ့ သဘောပါ။
အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ များသောအားဖြင့် ရလာဒ်နဲ့ နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူအတော်များများဟာ အရေးကြီးတာနဲ့ အရေးမကြီးတာကို ခွဲခြားမသိဘဲနဲ့ ချက်ချင်းအလျင်စလို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပဲ တုံ့ပြန်နေတတ်ကြပါသတဲ့။
အကျိုးရှိ အချိန်ရဲ့ အဓိက အသည်းနှလုံးဟာ အလျင်စလို လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတယ်။
ထိထိရောက်ရောက် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ပြဿနာ အာရုံစိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူးတဲ့။ သူတို့ဟာ အခွင့်အလမ်းရှာနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
တကယ်လို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မှန်မှန်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင် ခင်ဗျားရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အလုပ်ဟာ ဘာအလုပ်ပါလဲ။
နေ့တိုင်းသာ လုပ်သွားနိုင်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလုပ်ဟာ ဘာအလုပ်ပါလဲ။
အဲဒီအလုပ်ဟာ များသောအားဖြင့် ချက်ချင်းထ အလျင်စလိုလုပ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဘဝရဲ့ ကိစ္စတချို့ကို ငြင်းရဲတဲ့ သတ္တိ ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ခွင်တစ်ခွင်မှာ အောင်မြင်တာနဲ့ တခြားတစ်ခွင်မှာ ကျဆုံးသမျှကို အစားထိုးရနိုင်တယ်လို့ လူတော်တော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ရော ဟုတ်ပါရဲ့လား။
တကယ့် ထိထိရောက်ရောက်ဘဝမှာ နေမယ်ဆိုရင်တော့ ခွင်တိုင်း ဟန်ချက်ထိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုမှာပေါ့။
ကျွန်တော်ဖတ်မိသမျှထဲက ကြိုက်တာလေးတွေကို ပြန်ဝေမျှတာပါပဲ။ အားလုံးသော စကားစုလေးတွေမှာ ကျွန်တော်ကကြိုက်ဆုံးကတော့ “အချိန်ကို အသုံးချပုံဟာ ကံကြမ္မာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားစုလေးပါပဲ။ စာကိုးကတော့ ဆရာတင်မောင်သန်းရဲ့ အကျိုးရှိအချိန်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ မုံရွေးကနေ ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေ စုပြီးထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးကနေ ဖတ်လိုက်ရတာပါ။
အကျိုးရှိအချိန်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကံကြမ္မာတို့ကို ကျွန်တော်လွမ်းနေရတယ်။ စိတ်မတည်ငြိမ်စရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေရှိနေလို့ ကျွန်တော် ခဏတော့ ပျောက်နေမယ်ဗျာ။ အရိုးဆုံး ဝန်ခံရရင် E-Journal လေးကို ခုကတည်းက လွမ်းနေပါပြီ။ သူ့သက်တမ်းလေးလည်း တနှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ October 14, 2007 မှာ ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့ စတင်ခဲ့တာကိုး။ တနှစ်ပြည့်မတိုင်ခင်တော့ ကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။
ကျွန်တော်မရှိသော်လည်း အတူတူ ရေးဖော်၊ ရေးဖက်တွေ ဆက်လက်လို့ ရှင်သန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဆက်လက် အသက်ဆက်ပေးနေဖို့ တောင်းလည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ တခြားသူတွေ အလည်လာအောင် ကိုယ်တိုင်လည်း အလည်သွားရင်း မိတ်ဆက်ပေးမှလည်း ပျော်စရာပါ။ အချိန်ပေးနိုင်သလောက် သွားလည်ပေးကြပါ။ ပြုပြင်စရာတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်း အတူတကွ ကောင်းမယ်ထင်တာသာ လုပ်ကြပါ။ ကိုတာတူးနဲ့ ကိုကေဇက်တို့က အားလုံးပြုပြင်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။
အားလုံး ဆက်လက်လို့ ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်ကြပါစေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:12 PM7comments
မယ်တို့ ကငယ်လည်းငယ်သေးတော့ ဆရာမကြီးပြောတာကိုနားမလည်ဘူး....
သူတို့ မျက်နှာတွေက ကိုယ့်ကိုလိုလားတာ....မလိုလားတာ....
သူတို့ ရဲ့ သဘောထားအမှန်ကိုမသိနိုင်ပြန်ဘူး.....
သူတို့ မျက်နှာကိုမကြည့်မိလို့ သူတို့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကိုမသိလို့ ...
လူတွေမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လို့ မကြည့်ပဲနေဖို့ မလိုပါဘူး....
ကိုယ်ရဲ့ ခံစားချက်ကိုသူများတွေအပေါ်မမှီခိုပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ ပါ...
လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်နေသမျှ ...
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 6:23 PM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk, အရောင်စုံ အတွေးများ . . . . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:05 PM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 7:30 PM2comments
“စေတနာ ဟံ၊ ဘိက္ခဝေ ကမံ္မ ၀ဒါမိ”
ရဟန်းတို့ စေတနာကိုပင် ကံ ဟု ငါဆိုသည်။
“မေတ္တာဆိုတာ စိတ်မှာလွတ်လပ်သူ၊ စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးမားသူ၊ စိတ်မှာပြည့်စုံနေသူရဲ့ စိတ်မှာ အလိုအလျောက် ဖြစ်လာတာ။ လုပ်ယူရတာ မဟုတ်ဘူး။”
“မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ပင် သူတစ်ပါးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။”
မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အရာပါ။ ခင်များကိုခင်များ အရင် ဖြည့်မထားရင် သူတစ်ပါးကို ပေးစရာ ဘာမှရှိမှာ မဟုတ်ပါ။
ခင်များရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားပါ။ သင့်ပျော်ရွှင်မှုဟာ သင့်ဝန်တာ။ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု ကို ကိုယ်တာဝန်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေ ခင်များလုပ်တဲ့အခါ ခင်များဘဝနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သမျှသူတိုင်းအတွက် ခင်များကိုယ်တိုင်ဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်း စံနမူနာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခင်များ ပျော်ရွှင်လာပြီဆိုရင် သူတစ်ပါးကို ဝေမျှဖို့ဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သူ့အလိုလို စီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုးကား။.........။ THE SECRET by RHONDA BYRNE
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 5:40 PM3comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံ...ချန်ဒီကဒ်မြို့ က.... ပန်းပွဲတော်ကပုံတွေပါ....
တစ်နှစ်တခါကျင်းပတဲ့ .... ပန်းပွဲတော်ကပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပန်းတွေပါ.....
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ camera နဲ့ ရိုက်ထားပြီး....
movie maker သုံးပြီး movie file လုပ်ထားတာပါ....
မယ် ( 6း45pm.26.8.08)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 5:37 PM5comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk, ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ
အတွင်းမှ အပြင်သို့ ဆက်ဆံရေး
“ပထမဦးဆုံး ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကို့ သူတစ်ပါးက နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။”
မာရေးသျှင် “သတင်းနှင့် အတွေးအမြင် ... .. .” မှ
ဒါကြောင့် အတွင်းမှအပြင်သို့ဆက်ဆံရေးမှာလည်း မိမိကိုယ်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားဖို့က ပထမဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်ဖက်သားကို ကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်သားကို အောင်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ တစ်ဖက်သားကို ကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံစေချင်သလို သူ့အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံလိုက်ဖို့ပါပဲ။”
မာရေးသျှင် “ညီလေးသို့ ပေးစာ” မှ
ကျနော်တို့ သူများတွေက မိမိအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံစေချင်သလို မိမိကိုယ်ကို ပြုမူဆက်ဆံဖြစ်ကြပါသလား။
ကျနော်တို့ရဲ့ ကာယကံမှုတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မနောကံမှုက လာတာပါ။ ဒီတော့ ခင်များကိုခင်များ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ လေးလေးစားစား မဆက်ဆံခြင်းဟာ “ခင်များဟာ မလေးစားထိုက်သူပါ၊ မချစ်ခင်ထိုက်သူပါ”လို့ ခင်များကိုယ်တိုင် ကြေညာနေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ လူတွေရဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ခင်များ မကြုံဖူးတာပေါ့။တကယ်တော့ အဲဒီလူတွေက အကျိုးတရားသက်သက်မျှသာ။ တကယ့်အကြောင်းတရားက ခင်များကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေးတွေပါ။
ဒီတော့ အရင်ဆုံး ခင်များကိုခင်များ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။ ခင်များရဲ့ ဘဝမှာ ချစ်ခင်လေးစား အားထားသူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်လာမှာ အသေအချာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 5:53 PM5comments
ကျနော့်ကဗျာလေးအတွက် ဆရာသုက မှတ်ချက်ရေးပါတယ်။
ဆရာသုရဲ့ မှတ်ချက်အတွေးကို ကျနော်က ကဗျာ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဟဲ ဟဲ... ပျော်လို့ပါ။
ဆရာသု.... “သာဓု သာဓု သာဓု” ခေါ်ပါတယ်။
ဆရာသုလို လူများ ဤကမ္ဘာ၌ တိုးပွားပါစေသောဝ် ....
*CO2 = Coo = ချိုးကူသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:52 AM 1 comments
*CO2 = Coo = ခိုညည်းသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:10 PM 1 comments
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်နားမှာ စားစရာတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ ရှိတယ်။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ အသုပ်ဆိုင်၊ ကွမ်းရာဆိုင် စသဖြင့်ပေါ့။ သူတို့တွေအများစုကတော့ နယ်ကနေတက်လာကြပြီး စီးပွားရေးလုပ်စားနေကြတာ။ အလုပ်ကြမ်းရော၊ အခုလိုဆိုင်လေးတွေထွက်တာရော၊ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးရောင်းကြတာရော အစုံပါပဲ။ ပညာအရည်အချင်းကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ပါပဲ။ သူတို့စိတ်ဝင်စားတာ အကုန်တတ်တယ်။ စိတ်မဝင်စားရင် ဘာမှမတတ်တော့ဘူး။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သော်လည်း ဖဲချပ်တွေကို ကောင်းကောင်းကြည့်တတ်တယ်။ နေတာကတော့ ဒီလိုပါပဲ။ ကျူးကျော်ခေါ်မလား ရွှေ့ပြောင်းအိမ်ရာခေါ်မလား။ သူတို့ဘဝနဲ့ သူတို့ကတော့ လည်ပတ်နေကြတာ။
အရူးတွေအကြောင်းဆိုပြီး သူတို့ကိုပြောနေရတာ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ရူးနေဖို့သေချာနေပြီကိုး။ သူများတွေလို ပါဠိလေးဘာလေး ရွတ်တတ်ရင်တော့ ပြောချင်သား။ ဘာတဲ့ လူဆိုတာ အရူးကြည့်ပဲ ဆိုတာလေးလေ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ကျင်လည်ရာဘဝတစ်လျှောက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရူးနေကြရတာကိုး။ ခင်ဗျားလည်း အရူးပဲ။ ကျွန်တော်လည်း အရူးပဲ။ အိုဗျာ အားလုံးအရူးပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ပုံစံလေးတွေတော့ ကွာခြားကြမှာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ခင်ဗျားက ကဗျာတွေ၊ စာတွေနဲ့ ရူးသွပ်သူဆိုရင် ကျွန်တော်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ရူးသွပ်နေသူပေါ့။ လူတွေပြောကြပါသေးတယ်။ အရူးပါးတဲ့။ အတော်တော့ ခံရခက်တဲ့ စကားလုံးဗျ။ အရူးခြင်းအတူတူကို ဒီလိုလူက တစ်မူးပိုရှုတယ်လို့ ဆိုလိုတာကိုး။ နောက်ရှိသေးတယ် အတူတူချင်းကို မဆီမဆိုင် ဝိုင်းလက်ညိုးထိုးပြီး အရူးပါကွာလို့ သတ်မှတ်ကြတာ။
အဲဒီလို အရူးတွေပျော်ပါးနေတဲ့ လောကကြီး၊ တမျိုးပြောရရင် အရူးဘုံကြီးမှာ ကံတရားကပဲ ဒဏ်ခတ်တာလား၊ ဘဝပေးကုသိုလ်လားမသိ ရေချိန်အမြင့်ဆုံးထိ ရူးနေတတ်သူတွေ ရှိသေးတယ်။ တစ်ခါက ရန်ကုန် ရွာသာကြီးကို အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ သွားဖူးတယ်။ ဘတ်စ်ကားနဲ့ သွားရတာ။ ကားသေးတော့ လူလည်းကျပ်၊ ခရီးကလည်းဝေးဆိုတော့ ကားပေါ်မှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်၊ စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြတာပေါ့။ အတော်စကားပြောလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘေးနားက အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဘယ်ဟုတ်မလည်း ကားပေါ်ကဆင်းမယ်ဆိုတော့မှ သူက ဆေးသွားပြမဲ့ လူနာမှန်းသိတော့တယ်။ ယဉ်ယဉ်လေးရူးဆိုတာ ဒါနေမှာလို့ အဲဒီကတည်းက တွေးဖူးတယ်။
ရုံးနားမှာ ကျွန်တော်တို့က လ္ဘက်ရည်လေးသွားသောက်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း အသုပ်လေးဘာလေးစားရင်း စကားတွေပြောတယ်။ သူတို့ထဲက အမျိုးသားတစ်ယောက်က အရက်ကို ရေလိုသောက်တာပါ။ နေ့လည်ဆို ထမင်းမဆာပါဘူး။ အရက်ဆာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် ပြုံးနေတာပဲ။ မူးလို့ ဘယ်သူကိုမှ ရန်မရှာဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး အရက်သမားကြီးပေါ့။ အဲ.. ဒီနေရာမှာ သူကံကောင်းတာတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာမလိုဘူး။ မိန်းမက ရှာဖွေကျွေးနေတာ။ တစ်ခါတစ်လေ အားတောင်ကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သူ့ကိုပြောသတဲ့။ အရက်ဖြတ်ပါ။ ဆက်သောက်ရင် နောက်ဘဝကူးဖို့ အချိန်နီးနေပြီတဲ့။ မဆိုးပါဘူး။ အသက်တစ်ချောင်းကို သူလည်းချစ်တတ်တာပဲ။ အရက်ဖြတ်တယ်။ သောက်ကို မသောက်တော့တာ။
လူဆိုတာကလည်း ဆိုးတော့ဆိုးသားဗျ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လည်း အပါအဝင်ပေါ့။ မလုပ်သင့်တာကို သိနေရက်နဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးမိတာတွေလေ။ စွဲလမ်းမှုပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ နီးစပ်ရာ ဥပမာပေးရရင်တော့ ကွန်ပျူတာလေးကိုင်လိုက်တာနဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ဖွင့်မိနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့ဂ်စွဲတာကတော့ ကောင်းတဲ့ ရောဂါထင်ပါတယ်။ အဲ.. ဒါမျိုးပြောတာနေမယ်ဗျ။ အရူးပါးဆိုတာ။ ကိုယ်စွဲနေတာကြတော့ ကောင်းတဲ့ရောဂါတဲ့လေ။
သိပ်မကြာပါဘူး။ အရက်ဖြတ်တာ နှစ်လလောက်အကြာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က အဲဒီအကိုကြီး အရက်ကြောင် ကြောင်ပြီး ရူးသွားသတဲ့။ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာတုန်းဆိုတော့ ပြန်သောက်နေတာ တစ်လလောက်ရှိပြီဆိုပဲ။ အခုတော့ တွေ့တဲ့ခြုံကို ထိုင်ရှိခိုး။ နေပူကြီးလျှောက်သွား။ တယောက်တည်း စကားများ၊ ရန်ဖြစ်။ တွေ့မြင်နေရတာကိုက စိတ်မကောင်းစရာ။ ဟိုတရက်က ဆရာခေါ်ပြီး ဆေးထိုးတော့ စိတ်ငြိမ်ပြီး သတိပြန်ကပ်လာတယ်။ သူ့အမျိုးသမီးကိုလည်း ပြောသတဲ့ ငါကမနေရတော့ဘူး သွားတော့မယ်ဆိုပဲ။ အိမ်ရှင်မကလည်း ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်မှာဆိုပေမဲ့ သူက ကလေးတွေကို ငတ်မသေအောင် ရှာကျွေးနိုင်ပါသတဲ့လေ။ အားကျစရာ အားမာန်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတာပေါ့။
လူတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသိချင်ယောင်ဆောင်တာ ပိုများ ပိုင်နိုင်ကြလားမသိပါဘူးဗျာ။ အရူးဒီရေ တက်သွားသူအကြောင်းကို ပြောနေကြတာ အရက်လေးတစ်မြမြနဲ့လေ။ ငါကတော့ ရူးခါနီးရင် ရပ်လိုက်မယ်များ တွေးကြလားမသိပါဘူး။ ကြောက်တတ်မယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာဗျ။ သူတို့ တရှိုက်မက်မက် သုံးစွဲနေတဲ့ အရက်တွေက ကောင်းတာတွေ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတာသောက်လို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဟာမှ မသောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အခြေခံစားကုန်တွေကို ကျန်းမာရေးအတွက် သေချာစိစစ်ပြီး ထုတ်ပေးရင်တော့ အရက်သမားများလည်း အသက်ရှည်မယ်ထင်ပါတယ်။
တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးပေါ့။ အရက်ဆိုတာကလည်း လူမှုရေးမှာ နေရာအတော်ရပါတယ်။ သူမပါရင် ပွဲမစည်သလိုပါ။ လုံးဝကင်းဖို့တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်ပေးလောက်အောင်အထိ စွဲလန်းမိသွားရင် အကျိုးနည်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အရက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ဖြစ်ပါပဲ။ အခြေနိမ့်သူတွေမှာ ဒီလိုဖြစ်တာမြင်ရရင် ပိုလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ သူတို့မှာ ခံဖက်ကကြည့်ပဲကိုး။
အခြေခံကောင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သော အစားအစာ။ ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရူးဘုံသားခြင်းအတူတူမှာ ပိန်ညှက်ညှက်၊ မွဲခြောက်ခြောက် မြန်မာလေးတွေ နည်းလို့ အရက်ကြောင် ကြောင်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဆေးပညာ စကားစုလေးအဖြစ်သာ ကျန်နေခဲ့မှာပါ။ အရူးဘုံကြီးမှာ မဖြစ်သင့်သော အရူးဒီရေတက်မှုများ ကင်းဝေးလို့ အရူးအခွင့်အရေးများ တန်းတူခံစားနိုင်ပါစေသား။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 6:30 PM5comments
၂၀၀၅ ခုနှစ် တုန်းက ၂၅ နှစ်သား အစ်ကိုဖြစ်သူ၊ကျနော်က
၂၄ နှစ်သား ညီဖြစ်သူဆီရေးတဲ့ စာပါ။
အဲဒီစာကို မတော်တဆ ပြန်တွေ့ချိန်မှာပဲ
ဆရာသုခမိန် ရဲ့ “စာဖတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Reading Vs Personality” ကို ဖတ်လိုက်ရတာကြောင့် ဝေမျှလိုက်တာပါ။
ညီလေးဆီမှာရှိတဲ့ မူရင်းစာအတိုင်း ဖော်ပြရင်း
ကျနော့်ရဲ့ ညီအပေါ်မှာချစ်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ပါကြောင်း …..
တစ်ဖက်သားကို ကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်သားကို အောင်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ တစ်ဖက်သားကို ကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံစေချင်သလို သူ့အပေါ်ပြုမူဆက်ဆံလိုက်ဖို့ပါပဲ။
ပညာအရည်အချင်း၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ၊ စာရိတ္တ စတာတွေမှာ ဘာမျှပြောစရာမရှိတဲ့ ညီလေးကို ဘယ်ကျောင်းမှာမှ မသင်ခဲ့ရတဲ့၊ မြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာ မထင်ရှားတဲ့၊ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာချင်ရင်တောင် စာအုပ်စာတမ်း ရှားပါးတဲ့ ဒီလူမှုရေးရာ ကျင့်ဝတ်အဖြာဖြာကို လက်ဆောင်ပါးချင်ပါတယ်။
Etiquette လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Ticket (လက်မှတ်) လို့ အဓိပ္ပာယ်ရမယ့် ပြင်သစ်စကားက ဆင်းသက်လာတာပါ။ ရည်မွန်ယဉ်ကျေးတဲ့ ဂုဏ်သရေမြင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဝင်ဖို့ လက်မှတ်နဲ့တူတဲ့ အမူအရာ ကျင့်ဝတ်ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေပေါ့။ ပညာအရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု ချင်းတူပါလျက် (တစ်ခါတရံ ကိုယ့်ထက်လျော့နည်းပါလျက်) နှာတစ်ဖျား၊ ဖျာတစ်ပြား (ပြီးတော့) တစ်ကမ္ဘာခြား သာသွားသူတွေမှာ တွေ့ရတက်တဲ့ အားသာချက်တွေပေါ့။
”ရိုင်းစိုင်းနီးကပ်၊ မကိုင်းညွတ်ဘဲ၊ မတ်တပ်တိုး၍ မသွားနှင့်။”
“ရိုသေတုပ်ကွ၊ ဆည်းကပ်ကြလျက်၊ နေ့ ညကြည်ဖြူ၊ နည်းခံယူ၍၊ ကြီးသူခေါ်က၊ ကြွကြွလည်းလာ၊ ဗျာဗျာကျွန်ုပ်၊ ပုဆစ်တုပ်လျက်၊ ဖုံးအုပ်ခြေ လက်၊ လွန်ငြိမ်သက်သည်၊ ကျောင်းထွက်သူပေ ဆိုရချေ”
“ရှေ့ကစူးစူး၊ ဒူးလက်ကိုထောင်၊ ထိုင်ဆောင့်ကြောင့်နှင့် ပေါင်ထောင်လက်ကား၊ အပါးကြပ်ကြပ် မနေအပ်”စတဲ့ ရှင်မဟာသီလဝံသဆုံးမစာ လိုမျိုးပေါ့။
လက်ဆောင်ပါးချင်တယ်လို့ စကားဦးသန်းခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ မေတ္တာပါးလိုက်ပါတယ်ဆိုသလိုပေါ့ စိတ်နဲ့သာ ခံစားရယူရမယ့် သဘောတရားတွေပါ။ “လှေနံဓားထစ်”ပုံသေစွဲကိုင်ကျင့်သုံးလို့မရတဲ့ သဘောသဘာဝမို့ ပုံသေနည်းလို ချရေးလို့ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကာယကံရှင်ရဲ့ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိမှုနဲ့ အပြုသဘောဆန်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေပေါ်မှာပဲ အဓိကမူတည်ပါတယ်။
ကုလပ္ပဏံ - အမျိုးယုတ်မြတ်ကို၊ ဝိနယော ပမာဏံ - ကိုယ်အမူအရာ၊နှုတ်အမူအရာအားဖြင့် သိအပ်၏ ။ ဗျတ္တိပ္ပမာဏံ - ပညာရှိမရှိကိုကား၊ ကထိတဝါကျံ - ဆိုသောစကားဖြင့် သိရာ၏ ။ အဲဒီတော့ မိမိရဲ့ ကိုယ်အမူအရာ၊ စကားအသုံးအနှုန်း၊ လေယူလေသိမ်း စတာတွေဟာပဲ အကောင်းဆုံး Certificate ပဲပေါ့။
မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ပင် သူတစ်ပါးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ အနှစ်ချုပ်ပါပဲ။ အခြားသူတွေနဲ့ အတူရှိနေတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကာယကံမှု၊ ဝစီကံမှု၊ မနောကံမှုတိုင်းဟာ အခြားသူတွေကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ဖို့က နံပတ်တစ်ပါပဲ။ အဲဒီတော့ “အပ္ပမာဒေန သမ္မာဒေထ” မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ ထာဝစဉ် သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ နဲ့ နေဖို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အတတ်ပညာတစ်ရပ်ပါ။ အဖန်တလဲလဲ လေ့ကျင့်သင်ယူခြင်း ဖြင့်သာ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဖုတ်ပူမီးတိုက် တစ်ပွဲတိုး ဆေးမြီတိုနဲ့ မရပါဘူး။ ပွဲမဝင်ခင် အပြင်ကကျင်းပမှ ပွဲလယ်တင့်နိုင်မှာပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:16 PM5comments
အိပ်မက်တွေနဲ့သာ ရှင်သန်ခွင့် ရခဲ့ရင်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 2:43 PM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း, တောကြောင်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 7:28 PM 1 comments
လူတွေမှာ အချိန်ရယ်၊ စွမ်းရည်ရယ်က အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရေပြင်ညီဝန်ရိုးမှာ နယ်ပယ်တခုမှာ ဘယ်လောက် နက်နက်နဲနဲသိသလဲ၊ ထောင်လျက် ဝန်ရိုးမှာ အကြောင်းအရာ(နယ်ပယ်)တွေ ဘယ်လောက်များများသိသလဲ - ဆိုတဲ့ ဝန်ရိုးနှစ်ခုကို ဂရပ်မှာ ပြထားပါတယ်။ ညာဖက်ကို ရောက်သွားလေလေ နက်နက်နဲနဲသိလေ၊ အပေါ်ကိုထောင်တက်သွားလေလေ သိတာတွေကျယ်ပြန့်လေလေပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာတခုက ဒေါက်တာဘွဲ့ရသူတွေက သူတို့သိတဲ့နယ်ပယ်က မာစတာသမားတွေ၊ ကျောင်းသာတွေရဲ့ သိတဲ့နယ်ပယ်ထက် သေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ အဝန်းအဝိုင်းထဲကိုပဲ သိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ဖြူလာတခုနဲ့ ဂရပ်ကို ရှင်းပြပါ့မယ်။
a (နယ်ပယ်) +b(နက်နက်နဲနဲသိခြင်း) = c
(a> 0၊ b>0နဲ့ c ကတော့ ကိန်းသေပါ။ တခါတလေ အနုတ်ကိန်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
လူအမျိုးမျိုးဆိုတော့ a၊ b၊c တွေကလည်း မတူဘူးပေါ့။ သိတဲ့နယ်ပယ် ကျယ်လာလေလေ၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိတာတွေ နည်းသွားလေပါပဲ။ c - အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ c - ကြီးလာလေလေ နယ်ပယ်ရယ်၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိတာတွေလည်း တိုးလာလေလေပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကို လေ့လာတွေးတောနေမယ်ဆိုရင် စွမ်းရည်ကလည်း မြင့်လာမှပါပဲ။ နယ်ပယ်တခုရဲ့ အသိပညာတင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်း တိုးလာမှာပါပဲ။ c - တန်ဖိုးကတော့ အချိန်ရယ်၊ အားစိုက်မှုရယ်က အဖြေပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အားစိုက်ရင် တန်ဖိုးတွေ တက်လာမယ်။ နယ်ပယ်တခုကို လေ့လာတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးကျတော့ အခြားနယ်ပယ်တွေကိုလည်း နားလည်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲသလိုက ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျနော်နားလည်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ c - တန်ဖိုးတိုးလာတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်တာကိုး။
c -တန်ဖိုး တိုးလာအောင် ကြိုးစားပေမယ့်a- တခုကပဲ အခုခေတ်မှာ တိုးနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
သင်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနေရင်၊ သင့်နယ်ပယ်မှာလည်း ပညာရှင်ဆန်ဆန်သိတာပါပဲ။ သင်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရင် သင့်နယ်ပယ်ကို သင်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ဘက်စုံနယ်ပယ်ကနေ နားလည်တယ်လို့ သဘောရပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:50 PM5comments
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခင်စရာကောင်းသော၊ ဘောက်ကျကျဆက်ဆံရေးကို တစ်ခါတစ်ရံ ပြုမူတတ်သော၊ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သော၊ စကားပြောရင် ဟာသဉာဏ် ရွှင်ရွှင်နဲ့ တွေးတွေးဆဆ ပြောတတ်သော၊ အားလုံးခြုံမိအောင် ပြောမယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်များစွာဖြင့် အဖိုးတန် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိလေရဲ့။ ကျောင်းသားဘဝကနေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲအထိ အတူဆိုတော့လည်း ရင်းနီးကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူသားဆန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လည်း တယောက်ကို ပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ ရူးသွပ်နေကြတာပါပဲ။ တူတဲ့နေရာလေးတွေ ရှိသလို ညှိမရတဲ့အခါတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လက်ခံတတ်မယ်ဆိုရင် ပျော်စရာတွေပဲပေါ့။
ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ညှိမရတာလေးတစ်ခုရှိလာလို့ အခင်အမင်ပျက်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လို လူလတ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မရှိသလောက် ရှားကြမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက အနည်းအကျဉ်းတော့ လူတွေကို ရင့်ကျက်စေတယ်လေ။ ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်နိုင်ပဲကို တချို့သော ရင့်ကျက်မှုတွေက ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကောင်မလေးတွေ့တိုင်း အရူးအမူး လိုက်မကြိုက်တော့ဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တိုင်းလည်း ပြန်မကြိုက်၊ ကိုယ်မကြိုက်သော်လည်း ပြန်ကြိုက်ချင်ကြိုက်။ ဒါမျိုးတွေကို အရေထူလာပြီကိုး။ ဥပမာပြောပါတယ်။
ရင့်ကျက်မှု ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဒီကောင် ဒါလေးတောင်မသိရကောင်းလားလို့ တစ်ခါတရံမှာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာ နားလည်ပေးနိုင်မှု တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခံရတာပါပဲ။ လူတစ်ဦးကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ လွယ်ကူတာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ်တိုင် ဘာမှမသိပဲ အရမ်းကာရော နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အသိ(သတိ)ဆိုတဲ့ စိတ်လေးကပ်ထားပြီး ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကနေ သူ့အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ ချဉ်းကပ်တာ အကောင်းဆုံးလို့ မြင်ပါတယ်။ စာစကားလေးပါအောင် ပြောရရင် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို အတွင်းမှ အပြင်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းပေါ့။ ဒါဟာလည်း ကျွန်တော့်လို သာမာန်လူတစ်ယောက် အတွက်တော့ တစ်ခါတရံမှာ စည်းလွတ်သွားစေပါတယ်။ သတိဆိုတာလေး လွတ်သွားရင်ပေါ့။ ဒါတွေကလည်း ရင့်ကျက်မှုနည်းတာကို ပြတာနေမှာပါပဲ။
တရက်မှာပေါ့ အလုပ်ကအပြန် အခန်းရောက်၊ ရေမိုးချိုးပြီး ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆိုင်မှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းကြပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ ဟိုဟိုဒီဒီပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့လည်း ခပ်ထွေထွေဖြစ်လာသူတွေရဲ့ ဗီဇလေးတွေက ပြလာပါတယ်။ ငါက ဒီပြဿနာကို ဒီလိုထင်တာ။ သူက ဒီပြဿနာမှာ ဒီလိုလုပ်သင့်တာ။ အဲလို အဲလို။ အလုပ်ကိစ္စလေးတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း။ ဇာတ်ပေါင်းလို့ မရအောင်ကို စုံစီနဖာပေါ့ဗျာ။ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ထူးဆန်းစွာ ပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ စာဖတ်တာ ကောင်း၏၊ မကောင်း၏ကိုပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က ထူးဆန်းစွာလို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို ကျွန်တော်သိတယ်လေ။ သူက စာဖတ်ဝါသနာပါသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က စိတ်ပါနေရင် တွေ့တဲ့စာရွက်အစုတ်တောင် ကောက်ဖတ်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောတတ်သူ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ စကားတွေက ဒီနေရာမှာတော့ ကျောခြင်းကပ်ပြီး လမ်းလျှောက်မိသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်က သူ့ကို စာဖတ်စေချင်ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ သူကလည်း စာအုပ်တွေကို သူစိတ်မဝင်စားကြောင်း၊ စာဖတ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတာ သူလက်ခံကြောင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်တွေကနေ အသိတွေရမယ်၊ အလွယ်ပြောရင် လူ့ယဉ်ကျေးဖြစ်မယ်၊ ဘာဘာညာညာပေါ့ဗျာ။ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်မေးပါတယ်။ မင်းရော စာတွေအများကြီးဖတ်တော့ အခုဘာတိုးတက်လို့လည်းတဲ့။ လက်ဝှေ့ပွဲစကားလေးနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော့် မေးဖျားကို ဝိုက်လက်သီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ထိပါတယ်။ ခံနိုင်ရည်အတွက် အလေ့အကျင့်လေးများ မရှိခဲ့ရင် နောက်ကောက်နဲ့ ပွဲသိမ်းပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ဒီမေးခွန်းအတွက် အရမ်းပျော်မိပါတယ်။
လူတွေ ပြောလေ့ပြောထရှိတယ်။ “ငါပြောသလိုလုပ်။ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့တဲ့” တစ်ခါတရံမှာ ဒီစကား မှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ဟုတ်တယ်။ လူတွေမှာ သူကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အကောင်းစား အသိတွေရှိနေတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှာ သတိရှိမနေရင် ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ တွေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ဒီလိုစကားပြောနေသူကို ဒီစကားနဲ့ တန်ရဲ့လားလို့ ပြန်ချိန်ထိုးတတ်တာပါပဲ။ ဒီစကားတွေ လာပြောနေသူတစ်ယောက်ကို ဒီစကားနဲ့ မတန်ဘူးလို့ယူဆရင် ဘယ်လိုစကားဖြစ်ဖြစ် လူတွေက အရေးမစိုက်တော့ပါဘူး။ အလကားပါကွာ ဖြစ်သွားရော။ ဒါကလည်း မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ ပြောကြတယ်မဟုတ်လား “ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်တယ်” ဆိုတာ၊ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးအတွက် စကားစုဖြစ်မယ်။
စာအုပ်ကို ဖတ်စမ်းပါ။ သိပြီးသားတွေရော၊ မသိသေးတာတွေရော။ မဖြစ်သင့်တာတွေရော၊ ဖြစ်သင့်တာတွေရော။ မရောက်ဘူးတဲ့ အရပ်ရော၊ ရောက်ဖူးတဲ့ အရပ်ရော။ မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ရော၊ တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ရော။ မတတ်သေးတဲ့ အတတ်ပညာရော၊ တတ်ပြီးသား အတတ်ပညာရော။ မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့ ခေတ်တွေရော၊ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခေတ်တွေရော။ အို… စုံလို့ပေါ့။ ကိုယ်ဘာလိုချင်လည်း ရှာဖတ်လို့ရတယ်။ တခုပဲ ပေးဆပ်ရမယ်။ စာဖတ်ဖို့ အချိန်ပေါ့။ ကိုယ်က ဘာတွေပြန်ရမလဲ။ ဒါက ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်ရမဲ့ ကိစ္စပဲ။ အလွယ်ပဲ ပြောကြမယ်။ ဗဟုသုတရမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခုတော့ ရှိလာတယ်။ စာဖတ်တာကလည်း မိုးရေခံသလိုပါပဲ။ မိုးကတော့ ရွာလေရဲ့၊ စာအုပ်ကလည်း ဗဟုသုတတွေ ပေးလေရဲ့။ ကိုယ်မိုးရေကို ခံတဲ့ခွက်က ကိုယ်ရမဲ့ ပမာဏပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန် လက်ခံနိုင်မှုက ကိုယ်ရမဲ့ ဗဟုသုတ ပမာဏပေါ့။
တစ်ချို့စာတွေက ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလည်းဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတောင် တောက်ပြောင်လာစေတယ်။ ဘဝအတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကိုတောင် လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်က ခပ်တေတေ လူတစ်ယောက်။ အနာဂတ်ဆိုတာ ဟော့ဟိုဘက်နားမှာပါကွာလို့ ဟာသဖောက်တတ်သူ။ တွေ့ရာလူနဲ့ ပျော်တတ်ပြီး၊ ဘဝကို အရောင်မတင်တတ်သူ။ ထပ်ပြီး အမွှန်းတင်ရရင် ခပ်ညံ့ညံ့ကောင်။ တွေ့ကရာစာတွေဖတ်ပြီး တောင်တောင်အီအီ ပြောနေတတ်သူ။ နောက်ပြီး မဟုတ်မခံစိတ်နဲ့ ချက်ချင်း တုန့်ပြန်တတ်သေးတယ်။ သူငယ်ချင်းက စာဖတ်ဝါသနာပါသူကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အားမရပါဘူး။ အဲဒီအတွက်နဲ့ စာဖတ်ခြင်းကိုဝေဖန်တာပါပဲ။ သူမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြောဖူးပါတယ်။ မင်းစာသိပ်မဖတ်နဲ့တော့တဲ့။ မင်းအတွေးအခေါ်တွေက တွေဝေကုန်ပြီတဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ကျွန်တော် တူညီသောစကားစုနဲ့ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“ငါ့ကို ညံ့တယ်ပြောချင်ပြော။ စာဖတ်လို့ လူတွေက တွေဝေပြီး၊ ညံ့ကုန်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးကွ”
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:25 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 7:26 PM2comments
Rhyme ရဲ့ ဆုတောင်း ကိုဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ အမေ့ရဲ့ “အမှာ“ ကို သတိရပါတယ်။
ပထမတော့ သာမန် အမှတ်ရရရုံမျှပါပဲ။ ဒါပေမယ့် (၂၅)နှစ်သမီး Rhyme ရဲ့ လောကဓံ အထုအထောင်းတွေကို စုဆောင်းထားတဲ့ ဆုတောင်း ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖတ်မိလာတဲ့အခါ ကျနော်ရဲ့ (၂၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လက်ဆောင်၊အမေ့ရဲ့ “အမှာ“ မှာ သူ့အတွက် အဖြေပါသလို ခံစားလာရတယ်။
Rhyme ကတော့ သဘာဝက သဘာဝကျတာကို သဘာဝကျစွာ တုန့်ပြန်ခံစားထားတာပါပဲ။
အမေကတော့ သူ့သား၊ကျနော်ကို မှာတာ ကဗျာငွေ့တွေပါနေတာပါ။
အဲသည်တော့ ကဗျာအနေနဲ့ပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ အမေရဲ့သား ဖြစ်ရတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် ဤကမ္ဘာတွင် ပျော်ရွှင်ဖို့ လုံလောက်နေသူ ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားရင်း ...
ချစ်သော ညီမလေး Rhyme နှင့်တကွ မောင်နှမများသို့ ရည်ရွယ်ပါကြောင်း …
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 2:23 PM5comments
အသစ်သော ပါဝင်ရေးသားမဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အွန်လိုင်းနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းပါပဲ။ ကဗျာတွေရေးတာ ဝါသနာပါသူဆိုလို့ ပါဝင်ရေးသားနိုင်အောင် ကျွန်တော်ပဲ ကူညီခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အခုမှ အသစ် စတင်ရေးသားတာဆိုတော့ အားပေးကြပါအုံး။ အားပေးမှုတွေ သူ့အတွက် လိုအပ်နေမှာပါ။ သူကတော့ သိပ်လည်းမငယ်တော့တဲ့ အလွန်လည်း အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ Rhyme ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ E–Journal မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါကြောင်း……
အသစ် အသစ်သာ ဖြစ်ပါရစေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 3:21 PM6comments
အလျဉ်းသင့်လို့ အမေရေးတဲ့ကဗျာလေးတွေကို E-Journal မှာ ဖော်ပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တစ်နွယ်ငင်ကာ အဖေရေးတာလေးတွေကောလို့ အတွင်းသိတစ်ချို့ က မေးလာကြပါတယ်။
အမေနဲ့အဖေဟာ ကျနော်တို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်လို ကဗျာလေးတွေမှအပ အခြားကဗျာအများစုကို ကွမ်းစားတဲ့သူတစ်ယောက် ကြုံရာမှာ ကြုံသလို ကွမ်းထွေးထွေးသွားသလိုမျိုး လက်တန်းရေးရေးထားခဲ့တာ များပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်တပ်တာ၊ ကဗျာရေးသူအမည်တပ်တာ အလွန်ရှားပါတယ်။ တစ်ချို့ ကဗျာတွေဆို အမေရေးတာလား၊ အဖေရေးတာလား မကွဲပြားပါဘူး။
ဟဲ ဟဲ ကျနော်တို့မောင်နှမတွေကလည်း တခုတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ လုံးဝမရှိပါ။ အဲ စိတ်ထဲ စွဲစွဲထင်ထင်ရှိတဲ့ ကဗျာ(အနည်းစု)ကိုပဲ အသည်းစွဲမှတ်မိနေတာပါ။ “ဘအမျိူး ဘိုးတူ“ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကဗျာတွေဟာလည်း အဲသည်လိုပါပဲ။
အခု အဖေရေးခဲ့ပြီး ကျနော်မှတ်မှတ်ရရရှိနေတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အဖေက ခေါင်းစဉ် မတပ်ခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ် ကျနော်က မမှတ်မိပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော် မှတ်မိတဲ့ အတိုင်းလေးပဲ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:00 PM4comments
Ejournal ကနေမုန့် တွေနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်...အလည်လာသူအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ.....
ဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း Sarasak ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 3:35 PM3comments
Forward mail တစ်ခုကနေ သဘောကျတာလေးတွေကို မြန်မာမှုပြုထားတာပါ။ ရယ်စရာလေးတွေဆိုတော့လည်း ကိုရင်ညိန်းပြောသလို အသက်ရှည်တာပေါ့ဗျာ။ နော့။ မရယ်ရလည်း ရယ်ရတယ်ပြောဗျာ။ :P
“မိနွယ် - လူတွေက စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး ဆိုတဲ့အထိကို အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ စကားပြောနေတတ်သူတွေက ဘယ်သူတွေလည်း။ သိရင် ဖြေပါအုံး။”
“ကျောင်းဆရာတွေပါ - ဆရာ”
“မင်းအောင် - ရေရဲ့ ဓာတုဗေဒ ဖော်မြူလာကို ပြောစမ်း။”
“ H, I, J, K, L, M, N, O ပါဆရာ။”
“ဟေ့ကောင် မင်းဘာတွေ ရွတ်နေတာလည်းကွ။”
“မနေ့က ဆရာပဲ ရေရဲ့ ဓာတုဗေဒ ဖော်မြူလာက “H to O” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။”
“မိနွယ် - မိကျောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို မင်းဘယ်လို စာလုံးပေါင်းမလဲ။”
“မင်း စာလုံးပေါင်းတာ မှားနေတယ်။”
“ဟုတ်ကဲ့။ မှားချင်မှားနေမှာပါ ဆရာ။ ဆရာက သမီးဘယ်လို စာလုံးပေါင်းလည်း မေးလို့ ဖြေလိုက်တာပါ။”
“မင်းအောင် - ဆရာ့နားလာပြီး မြောက်အမေရိကတိုက်ကို အားလုံးမြင်သာအောင် မြေပုံမှာ ထောက်ပြလိုက်ပါအုံး။”
“အေး.. မှန်တယ်။ ကဲ - အခု တစ်တန်းလုံးက ဖြေပါအုံး။ အမေရိကကို ဘယ်သူ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တာလည်း။”
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 2:30 PM7comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုခမိန်, ပျော်စရာလေးတွေ
စကားလုံးတွေ တရစပ် ကြွေကျခဲ့တယ်။
ဟိုး ....... အဝေးကိုကြည့်လိုက်တော့
သိပ်ကိုထူးဆန်းတဲ့ ရယ်သံ သဲ့သဲ့လေးတွေက
(အသံကလေးကတော့ ထွက်ပြေးလို့ပေါ့ .....)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 4:37 PM4comments
ကျနော်ဘာကြောင့် အသက်ရှင်နေလဲ ?
(ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လတွေတိုင်းရဲ့ နေ့ရက်တွေဟာ အင်္ဂါနေ့တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 4:28 PM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 3:49 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 1:59 PM 1 comments
ဒီနည်းလေးက မယ်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကနေ ကူးယူထားတာပါ....စာရေးတဲ့သူနဲ့ စာအုပ်ကိုသေချာမမှတ်မိတော့ဘူး... ဒီနည်းလေးက ကိုယ့်မွေးနေ့ ရယ်.... လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေ့ ရယ်နဲ့ မေးရတာပါ.... ခုရောက်နေတဲ့နေ့ ထဲကနေ ကိုယ်မွေးနေ့ ကိုနုတ်ရပါမယ်.... ပြီးရင်ဂဏန်းတစ်လုံးပဲကျန်အောင်ပေါင်းရမယ်.... အဲဒီကျန်တဲ့ဂဏန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုအောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်....
ယနေ့.................. 09 08 2008
မွေးနေ့ .................. 01 01 1979
နှုတ်လို့ ရတဲ့အဖြေ.....08 07 0029
ရလာတဲ့အဖြေကို ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းကျန်အောင်ပေါင်းရမယ်... 0+8+0+7+0+0+2+9 = 26
အဖြေက 8 ပါ.....
1 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- မုချတစုံတခုရမဲ့နေ့ တဲ့....
2 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ကိုယ်ပြောသမျှကို ဘယ်သူကမှ မဟုတ်ဘူး မပြောပဲ လက်ခံမဲ့နေ့တဲ့....
3 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ကံအကောင်းဆုံးနေ့ တဲ့....
4 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- မိုးလင်းကတည်းကနေ... မိုးချူပ်တဲ့အထိတနေကုန် အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့နေ့ တဲ့....
5 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ဘာကိုမှကြိုတင်ကြံစည်ပြီးလုပ်လို့ မရတဲ့နေ့ တဲ့.... လုပ်စရာရှိရင်....လုပ်ချင်တာရှိရင်ချက်ချင်းလုပ်ပါတဲ့...ဒီနေ့မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆီက လဘ်လာဘတွေဝင်လာတတ် ပါတယ် တဲ့....
6 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ကံကောင်းတဲ့နေ့ .... အချစ်ရေးကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာမဲ့ နေ့ တဲ့....
7 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနေနေရတတ်တယ်။
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ ရောက်သွားတတ်တယ်.... မစားဖူးတဲ့အစားတွေစားရတတ်တယ်တဲ့....
8 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ကံအဆိုးဆုံးနေ့ တဲ့.... ကြေကွဲစရာ...၀မ်းနည်းစရာတွေ ရောက်လာတတ်တယ်တဲ့....အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ မလုပ်မိအောင်သတိထားပါတဲ့.....
9 ဂဏန်းရတဲ့နေ့--- ကံအဆိုးဆုံး (သို့ ) ကံအကောင်းဆုံးနေ့ တဲ့.... တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေဖူးရတတ်တယ်တဲ့။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 11:39 AM2comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk, ဗေဒင်ကဏ္ဍ
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ အဆွေတော်၊ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ရဲ့ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာနကို ဖော်ပြတဲ့ ဘေဂျင်းအိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ဆင်နွဲနေပါတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ချစ်သော စင်္ကာပူရ်ကလည်း အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို အံ့သြဘနန်း တခမ်းတနား ကျင်းပပါတော့မယ်။
အဲဒီအကြည့်၊အဲဒီအသိတွေဟာ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ ကျနော့်ဘဝကို ဥာဏ်အလင်းပြန်ရစေပါတယ်။
၁၉၉၈ က ဘဝ ပါ။
တစ်စုံတစ်ရာမှသည် အစစအရာရာအတွက် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း....
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:22 PM3comments
ကျနော် စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
အဲဒီအခါ ဆယ်တန်းတုန်းက စာကြည့်ခဲ့တာကို သတိရလာပါတယ်။
(အဲဒီတုန်းက) ကျနော်က ညဉ့်နက်အောင် စာကြည့်ရတာမှာ မွေ့လျော်ပါတယ်။
ကျနော် ညဉ့်နက်တော့ ကျနော့်မိဘများ အိပ်ရေးပျက်ကြရှာပါတယ်။
ကျနော် စာကျက်တဲ့ အသံကြောင့် မဟုတ်ပါ။
ကျနော် စာကျက်တာ အသံမထွက်ခြင်းကြောင့်ပါ။
ထိုအခါ ကျနော် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရပါတယ်။
ရွှင်သောစိတ်နဲ့ မဟုတ်ပါ။ မချိသောနှလုံးဖြင့်သာ…
အခု … ကျနော့်အလွမ်းကို မဖော်ပြနိုင်တဲ့အဆုံး
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:53 PM6comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 11:06 AM4comments
ဒီနည်းလေးက… မယ်ရဲ့ အဆောင်မှူး မမတစ်ယောက် ပြောပြတဲ့နည်းလေးပါ…
ဒီဗေဒင်ကတော့ YES or NO! အဖြေပဲပေးနိုင်ပါတယ်….
တစ်ရှူးတစ်ရွက်ရှိယုံနဲ့ မေးလို့ ရပါတယ်….
တစ်ရှူးတစ်ရွက်ကို ဒေါင်လိုက် (သို့ ) အလျားလိုက် (၆) စပိုင်းလိုက်ပါ….
ပြီးရင် တစ်ရှူး တစချင်းစီကို ကြိုးကျစ်သလို ကျစ်လိုက်ပါ…
အဲလို ဆိုရင် တစ်ရှူးကြိုး (၆) ကြိုးရမယ်….
ရလာတဲ့ တစ်ရှူးတွေရဲ့ အစတဖက်ကို လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်….
ဥပမာ …. စာမေးပွဲအောင်မှာလား အောင်မယ်ဆိုရင် အကွင်း (၃) ကွင်းရပါစေ….
အဲလိုမေးပြီးရင်….တဖက်မှာရှိနေတဲ့ ကြိုးစတွေကို (၂) ပင်စီပူး ချည်လိုက်ပါ….
ပြီးရင် မချည်ရသေးတဲ့ နောက်တဖက်မှာရှိတဲ့ အစတွေကို (၂) ပင်စီပူး ချည်လိုက်ပါ….
ပြီးရင် လက်ဖ၀ါးဖြန့် ပြီးတစ်ရှုးတွေကို ကြည့်ရင် ကြိုးကွင်းလေးတွေရနေလိမ့်မယ်….
အဲဒီကြိုးကွင်းလေးတွေက (၃) ကွင်းဆိုရင်တော့….. အောင်ပြီပေါ့…..
ကြိုးကွင်းက (၁) ကွင်း (၂) ကွင်း (၃) ကွင်း အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်….
ပြီးတော့သီးသန့် ကွင်းလေးတွေကော… ကွင်းဆက်လေးတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်….
ကွင်းဘယ်နှစ်ကွင်းလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာ ကွင်းဆက်လေးလား သီးသန့် ကွင်း လားဆိုတာကို သေချာပြောနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် …..
PS . ( ဒီနည်းလေးသုံးပြီးဗေဒင်မေးရင်… ကိုတာတူးတို့ ….. ကိုတားမြစ်တို့ လို လူပျိုကြီးတွေ….
အခက်တွေ့ နိုင်ပါတယ်…. တစ်ရှူးကိုင်ပေးမဲ့သူမရှိလို့ လေ…..)
မယ် (5:00 pm .2.8.08)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 12:00 AM6comments
မင်းရဲ့လက်ယာ၊ မှန်ထဲမှာ ဘယ်
မင်းရဲ့လက်ဝဲ၊ မှန်ထဲမှာ ညာ။
ဆရာမျိုးမြင့်ဆွေရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ စာအုပ်လေးက လက်ထဲမှာ ရက်အတော်ရနေပါပြီ။ ဆရာ့ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် ဝေမျှအုံးမယ်ဆိုပြီး ရှာနေရင်းပေါ့။ တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ဒီစာအုပ်လေးက “မှန်ထဲကသစ္စာနှင့် အခြားကဗျာများ”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆရာရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်း ငါးနှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ထုတ်တာပါ။ ၁၉၉၅ မှာထုတ်တာပါ။ အခုဆိုရင် ဆရာကွယ်လွန်တာ ၁၈နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ လူသေသော်လည်း အမည်မသေသူလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဆရာကျင်လည်တာက ပန်းချီလောက၊ ကဗျာလောက၊ ဂီတနဲ့ စာပေမှာဆိုတော့ ခေတ်အရ သိသူရှိသလို မသိသူလည်းရှိမှာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ဘလော့ဂ်လေးရဲ့ ဧည့်သည်တွေ စိတ်ဝင်စားစရာမဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ရှာမိပါတယ်။ ပထမဆုံးကဗျာဖြစ်တဲ့ “အဘိုးနောက်မှာ” (သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအကြောင်း) ကဗျာကနေပြီး ဖတ်ကောင်းမဲ့ကဗျာတွေပဲ တွေ့နေလိုက်တာ ဘာကိုရွေးပေးရမှန်း မသိပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ပိုစ့်ကို ခပ်ရှည်ရှည်လေး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကဗျာစာအုပ်လေးမှာ ကဗျာတွေ အများကြီးကို ပြန်လည်စုစည်းထားတာပါ။ စီစဉ်သူက ရက်စွဲလေးတွေအလိုက် စီထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရက်စွဲလေးတွေကို ဂရုပြုပြီး ဖတ်မိပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဆရာ့ကဗျာတွေအားလုံးကို ခံစားရင်းကနေ သတိထားမိသွားတာတစ်ခု ရှိလာပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ဆရာဟာ လူ့ဘဝကို ရထားကြီးတစ်စီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိတာကိုပါ။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီစာအုပ်လေးမှာ နောက်ဆုံးကဗျာလည်းဖြစ်၊ ရထားတစ်စီးနဲ့ တင်စားထားတဲ့ ကဗျာလည်းဖြစ်တဲ့ “မေတ္တာပို့” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုလည်း ဝေမျှဖို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။
လူ ဟူစလောက်၊ လိုရာရောက်၍
ငါ အရင့်အမာ၊ မဟုတ်ပါ၍
နောက်သတိထားမိတာ တစ်ခုက ဆရာဟာ ကဗျာကို ပုံစံမျိုးစုံ ရေးသွားတာပါ။ ဥပမာ “ဂျိမ်းဖောပွဲတော်” လိုကဗျာမျိုး တွေအပြင်၊ လေးလုံးစပ်တွေ၊ ကာရံတွေကို အထူးပြုရေးတတ်ပါတယ်။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ စကားလုံးတွေကလည်း သာမာန်ဖြစ်ပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါအောင် စပ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကလောင်စွမ်းတာကို သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အများအတွက်၊ ပြည်သူအတွက် လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတာ ကဗျာတွေမှာ မြင်နေရပါတယ်။ ပိုပြီး သိသာစေဖို့ ဆရာ့ကဗျာတွေထဲကနေ ကျွန်တော်တို့လို နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် သတိထားစရာလည်းရမလားဆိုပြီး “ကဗျာမလေး တစ်ယောက်အကြောင်း” ဆိုတဲ့ ကဗျာကိုလည်း ဝေမျှဖို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။
စာစပ်ကို သင်ပြပေးပါ တဲ့
“မှန်ထဲက သစ္စာ”ကိုတော့ စာအုပ်ခေါင်းစဉ် ယူထားတဲ့ ကဗျာဖြစ်နေလို့ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာက လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးပဲ အမှာရေးထားပါတယ်။ “ကျွန်မတို့အချင်းချင်း တစ်ဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ ကျန်ရစ်သူများက ဒါလောက်ကလေးပဲ လုပ်နိုင်စွမ်းတော့တာလား …” “… ဒီလိုအနုပညာ ပါရမီရှင်တစ်ယောက် ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မတို့တတ်နိုင်တဲ့ မပြောပလောက်တာကလေးမျိုးနဲ့ ကူပံရတာ မလုံလောက်တာတော့ အမှန်ပဲလို့ အောက်မေ့မိတဲ့အကြောင်း ရေးသားပါရစေ။”
ကဗျာအများစုကိုတော့ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ပဲဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဆရာမျိုးမြင့်ဆွေကို ပိုရင်းနှီးသွားအောင် ဒီစာအုပ်လေးမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အထုပ္ပတ္တိလက်ရေးမူကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် မန်ကျီးတောရွာ ကျောင်းဆရာ ဦးအေးမောင်နှင့် ဒေါ်လေးငွေတို့မှ ၁၉၃၃ ခု- အောင်တိုဘာလတွင် ဖွားမြင်သော သားရတနာဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးမြသောင်းဖြစ်သည်။ ဦးအေးမောင်နှင့် ဒေါ်လေးငွေတို့၏ သားသမီး (၈)ယောက်အနက် ဒုတိယမြောက် မွေဖွားသူဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုမှစ၍ ကဗျာများကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မန္တလေးထုတ် ဗဟိုရ်စည်၊ မန္တလေးသူရိယ၊ နဂါးနီ-ရှမ်းပြည်၊ မြတ်ရတနာ၊ ပန်တော်ဆက် စသော စာနယ်ဇင်းများနှင့် မြဝတီ၊ သွေးသောက်၊ ငွေတာရီ၊ သင့်ဘဝ စသော ရန်ကုန် စာနယ်ဇင်းအမျိုးမျိုးတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် “မိုးသောက်ယံ” ကဗျာများကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် “အလင်းခေတ်” ကဗျာများကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် “ခလေးအဖော် ရွှေဇီးကွက်”၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် “လိမ္မာယဉ်ကျေး မေ့ရင်သွေး” ကဗျာများကိုလည်းကောင်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၅၉ ခုနှစ် မြတ်ရတနာ မဂ္ဂဇင်း စာပေပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေမန်းတောင် ကဗျာဖြင့် ပထမဆု၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများအသင်း စာဆိုတော်နေ့ စာပေပြိုင်ပွဲတွင် “နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့” ကဗျာဖြင့် ဒုတိယဆုကိုလည်းကောင်း၊ ဓနသဟာယစာစောင် ကဗျာပြိုင်ပွဲတွင် “မောင်ကြီးတို့ရွာ”ကဗျာဖြင့် ပထမဆုကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ဆုများဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေ ဆုနှင်းသဘင်တွင် “လူသားနှင့်ဝန်းကျင် ကဗျာများ” စာမူဖြင့် ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
မျိုးမြင့်ဆွေသည် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဇော်ဝမ်းသီဆိုသော ကျောက်ခဲ၊ သဇင် အစရှိသော ရုပ်ရှင်သီချင်းများ။ မီးခိုးလိုလူ တိမ်လိုလူ၊ ထရံပေါက်က နေပြောက်ကလေး၊ မေတ္တာမိုး စသော မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီသီချင်းများ။ ဒေါင်မလေး၊ မန္တလေး မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓဝင်ပြခန်း စသော ကက်ဆက်ခွေ သီချင်းများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
ယနေ့အထိ ကဗျာများကို အဆက်မပြတ် ရေးသားနေသည်။ သို့ရာတွင် မျိုးမြင့်ဆွေ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ ပန်းချီ (ပုံရေး၊ ပုံဆွဲ) လုပ်ငန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ ဘီဘီစီအသံလွှင့်ဌာန၏ နှစ် ၅၀-မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသော ၇၂ နိုင်ငံပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့ပန်းချီပြပွဲတွင် “ဝေးမြေခြားမှ စကားလက်ဆောင် တေးလက်ဆောင်” ပန်းချီကားဖြင့် ဘီဘီစီ အရှေ့တိုင်းဌာနခွဲ၏ ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ယခုအခါ မျိုးမြင့်ဆွေသည် မန္တလေးမြို့ မြေနီကျင်းရပ် ၃၂-လမ်း အမှတ် (၁၇၇) နေအိမ်တွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူနေထိုင်ရင်း ကဗျာနှင့်သီချင်းများ ရေးစပ်ခြင်း၊ ပန်းချီရေးခြင်းစသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
အားလုံးပဲ သီးခံပြီးတော့ ပြီးအောင်ဖတ်သွားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ကို အဆင်သင့်မယ်ဆိုရင် ဆရာ့ကဗျာတွေကို ဝေမျှပါအုံးမယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 11:18 PM5comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုခမိန်, ဝေမျှခြင်း ကဗျာများ
စိတ်ဖြေစရာ တစ်ခုအနေနဲ့ ...
Winamp လို Software ကို သုံးပြီး Male /Female/Couple Vocalist အစုံပါတဲ့ သီးချင်းပေါင်းစုံ (အချစ်… အလွမ်း… အပျော် ) ကိုထည့်ပါ…
ပြီးရင်…Play မှာ Shuffle (သို့ ) Random ကို ရွေး…
ပြီးရင် Play ……အဲ…. ပြီးရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့မေးခွန်းကိုမေး…
ဥပမာ….. " သူ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာရှိလဲ " လို့ စိတ်ထဲမှာမေးပြီးရင် Next ကို Click ….
အဲ… Play နေတဲ့သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကအဖြေပါပဲ ……
ကိုယ်သိချင်တဲ့မေးခွန်းကို ကိုယ်လိုသလိုမေးပြီး သီချင်းစာသားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အဖြေအဖြစ်ယူလိုက်ပါ….
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 9:30 PM4comments
မစားရ ၀ခမန်းတွေကို ဖြစ်လို့ ။
မနိုင်ခဲ့ ကြသူတွေ ထိုင်ကြ
နစ်သထက် နစ် နေလိုက်ကြတာ
ငါ . . . ငါဆိုတဲ့ အတ္တတွေတောင်
အရောင်တွေ လွင့်လို့ ။
ဤ သို့ ထိုသို့
တစ်ထောင့် တစ်ည ပြောမကုန်ကြတာလည်းရှိ
သြော် . . . လူတွေများနှယ်နော် ။
အဟီး စိတ်ဆိုးကြနဲ့နော် စတာ ။:D
ဖွက်ထားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရှိသေးတယ် ။
လာခဲ့ သွားမယ်ကွယ် ဘုရား
အဲလေ . . . မှားလို့
တစ်သက်လုံးပဲ ချစ်တော့မယ် ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 11:20 PM 12 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း, တာတူး (ဝါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက်
ကျွန်တော်ခင်မင်ရတဲ့၊ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကို ဝင်ရောက်နေတဲ့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို အွန်လိုင်းအဆင်ပြေတိုင်း ဖွင့်ကြည့်ရတာအမောပါ။ ကိုယ်ရေးထားတာလေးတွေ၊ အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတို့ ရေးထားတာလေးတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်၊ ကွန်မန့်လေးတွေကို ထပ်ဖတ်ကြည့် လုပ်နေရတာ စိတ်အစာပြေစေပါတယ်။ အချိန်များရခဲ့ရင် ဘလော့ဂ်လျှောက်ရင်း စာတွေဖတ်၊ ကွန်မန့်ရေး၊ စီဘောက်စ်မှာ နှုတ်ဆက်နဲ့ အများတကာကြည့်ရင် တကယ့် အရေးတကြီး ကိစ္စတစ်ခုခုကို လုပ်နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အနည်းအကျဉ်း (ဒါမှမဟုတ်လည်း အတော်များများ) ဘလော့ဂ်လေးတွေက ဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အစချီနေရတာက ပြောချင်တာလေးရှိလို့ပါ။ တရက်မှာ ဘလော့ဂ်လျှောက်ရင်း စာတွေဖတ်လိုက်၊ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်ကြည့်လိုက် လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အနားမှာရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူဖတ်ဖူးတာလေးတစ်ခု ပြောပြပါတယ်။ သူ့စကားလေးတွေကို သဘောကျလို့ စာလာဖတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ပြန်ဝေမျှပါတယ်။ သူပြောတာကတော့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ စာလေးပါတဲ့။ သူက အကြောင်းအရာကိုပဲ မှတ်မိလို့ အကြောင်းအရာကိုပဲ အဓိကပြောသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အကြောင်းအရာလေးကိုပဲ အဓိက ပြန်လည်ပြောပြပါမယ်။ အားလုံးပဲ သတိထားနိုင်အောင်ပါ။
တစ်ခါက လူ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းအပြီးမှာ အပြစ်တွေကို ပေးဆပ်စရာရှိလို့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာ ငရဲမင်းကြီးဆီကို အတူတကွ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ငရဲမင်းကြီးလည်း သူတို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကြည့်၊ လိုအပ်တာတွေ စစ်ဆေးအပြီးမှာ အပြစ်ရှိသူနှစ်ဦးကို သူ့လက်ထောက်လက်အပ်ပြီး ဆီပူနဲ့ကြော်တဲ့ငရဲကို ပို့စေလို့ မိန့်သတဲ့။ အဲဒီနှစ်ဦးမှာ တစ်ဦးသောသူက လူ့ဘဝမှာ တိုင်းသိ၊ပြည်သိ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာပါတဲ့။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘာမှအထွေအထူးမလုပ် လူ့ဘဝမှာ အချိန်လေးရတာနဲ့ အရက်သေစာ သောက်စားတတ်သူ အရက်သမားပါ။ ငရဲမင်းကြီးရဲ့ လက်ထောက်အရာရှိက သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာငရဲကိုပို့ပြီး အပြစ်ပေးပါသတဲ့။
ဆီပူမှာ စာရေးဆရာကိုထည့်ကြော်၊ မီးအပူစပေးတော့ မီးအရှိန်က နည်းသတဲ့။ အရက်သမားမှာတော့ ဆီပူမှာစထည့်ခံရကတည်းက ပြင်းလွန်းတဲ့ မီးအရှိန်နဲ့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ငရဲကျသူနှစ်ဦး ပြစ်ဒဏ်တွေခံနေလိုက်ရတာ အဖြည်းဖြည်း ကြာလာပါလေရော။ အဲဒီမှာပဲ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေက သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ကွားခြားလာပါတော့တယ်။ စာရေးဆရာရဲ့ ဆီပူအိုးမီးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုလို့သာ အရှိန်ကောင်းလာပါတယ်။ အရက်သမားရဲ့ ဆီပူအိုးမီးကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်ကျလာလိုက်တာ ဖယောင်းတိုင်မီးသာသာပဲ ရှိတော့သတဲ့။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင် အရက်သမားရဲ့ မီးအပူရှိန်က လုံးဝသေဖို့ ဖြစ်လာပြီး၊ စာရေးဆရာခမျာမှာတော့ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ ဆီပူမှာ တကြော်ကြော် အော်ဟစ် ခံစားနေရတော့မှာပါ။
ဒါကို သတိထားမိတဲ့ စာရေးဆရာက ငရဲမင်းရဲ့လက်ထောက်ကြီးကို မကျေနပ်ကြောင်းပြောပါတော့တယ်။ လက်ထောက်ကြီးကလည်း ညွှန်ကြားချက်အရလုပ်ရတာ သူကတော့ မျက်နှာလိုက်ခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပြောချင်သပဆိုရင် ငရဲမင်းဆီ ခေါ်သွားပေးမယ်လို့ ပြောသတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ စာရေးဆရာဟာ ငရဲမင်းဆီသွားလို့ အရေးဆိုပါတော့တယ်။ ငရဲမင်းကြီးလည်း စာရေးဆရာရဲ့ မကြေနပ်ချက်တွေ တင်ပြပြီးတဲ့အထိ ပြုံးလို့နားထောင်ရင်း သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကို ရှင်းပြသတဲ့။
“အရက်သမားက ကောင်းမှုကုသိုလ်မလုပ်သော်လည်း အရက်သေစာ သောက်စားထားချိန်မှာသာ အမှားတွေလုပ်၊ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတာ။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခမပေးဘူးကွ။ သေလွန်သည်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာလည်း သူ့အပြစ်တွေက အကျိုးဆက်မရှိ ရပ်တန့်သွားပြီ။ မင်း-စာရေးဆရာကတော့ အရေးကောင်းကောင်းနဲ့ မင်းရဲ့အတွေးအမြင်တွေ၊ နိယာမတွေကို ဖြန့်ဝေ။ လူတွေကို ဒုက္ခပေးလိုက်တာ သေလွန်သည်ရဲ့နောက်မှာတောင် အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်ကိုပျံ့နှံ့၊ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကို ဒုက္ခပေးနေတာ။ မင်းအပြစ်က ရပ်တန့်မယ်မထင်ဘူး။ ကဲ - အဲဒါ မင်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ ကွာခြားချက်ပဲ” လို့ ရှင်းပြသတဲ့။
ရေဒီယိုက လေသံအတိုင်းပြောရရင် ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်ပေါ့။ အရေးအသားကောင်းလိုသူနဲ့ အရေးအသားကောင်းသူတို့ရေ သတိတော့ထားကြဗျို့။ စာပေဟာ ပြည်သူ့အတွက်၊ အနုပညာအတွက်။ ဘယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ အများသူငါအတွက် ဒုက္ခကင်းမဲ့၊ အကျိုးရှိမဲ့ စာကလေးတွေသာ ဝေမျှနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်သဗျာ။ တော်ကြာ မီးအရှိန်တွေ တိုးသထက်တိုးတဲ့ ငရဲမျိုးမှာလည်း ရောက်နေကြအုံးမယ်နော်။ သတိ ပိုတယ်လို့ မရှိကြောင်းပါ။
မှတ်ချက်။…..။ သူငယ်ချင်းပြောသော အကြောင်းအရာလေးကို ဖတ်ကောင်းအောင် ပြန်ရေးပြတာပါ။ အပျော်သဘောပါခင်ဗျာ။ မူရင်းစာကို ဖတ်ဖူးထားသူတွေကိုလည်း တောင်းပန်၏။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:55 PM9comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ပုံပြင်လေးတွေ, သုခမိန်, ပျော်စရာလေးတွေ